Dowlada Imaaraatka Carabta oo la xaqiijiyey in lagu wareejinayo dekedii labaad ee ku taalla Soomaaliya!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Dowlada Imaaraatka Carabta oo la xaqiijiyey in lagu wareejinayo dekedii labaad ee ku taalla Soomaaliya!!
Dowlada Imaaraatka Carabta oo la xaqiijiyey in lagu wareejinayo dekedii labaad ee ku taalla Soomaaliya!!
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Puntland Maxamed Ceydiid Jaamac ayaa xaqiijiyey in dowlada Imaaraatka Carabta lagu wareejinayo Dekeda magaalada Boosaaso kadib markay ka iibsatay Cabdiwali gaas oo si gooni ah loo siiyay $15 Malyan.
Maxamed Ceydiid Jaamac ayaa sheegay in sababta Imaaraadka loogu wareejinayo Dekeda Boosaaso ay tahay in la ballaariyo dekeda lana xoojiyo shaqooyinka ay bulshada u heyso.
“Duruufta ka jira Dekeda Boosaaso waxay keeneysaa in Dekeda la ballaariyo, oo konteynarada iyo allaabaha waaweyn ee maraakiibta ay wadaan ku soo xirtaan, muhiimada waxa weeye wixii aad adiga qabsan kartid inaad qabsato, wixii aad qabsan karinna inaad la raadsato cid kula qabata” ayuu yiri Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Puntland.
Madaxweynaha Puntland oo dhowr jeer isaga daba laabtay dalka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inuu kala hadlayey sidii Imaaraadka loogu wareejin lahaa Dekeda Boosaaso.
Sababta dowlada Imaaraadka u rabto inay kula wareegto Dakadaha Muhiima ayaa ah inay Dakadaha Soomaaliya aysan noqon Dakado Caalami ah oo looga maarma Dakadaha Imaaraadka. waxaana Adduunka uu doonayaa inay Mariin muhiim ah ka dhigtaan Dakadaha Soomaliya halka arintaas ay kasoo horjeedo Imaaraadka waxay nafta ku kaliftay inay la wareegto Dakadaha Soomaaliya si uusan u waynaan Dhaqalaha Soomaalida iyo Dowladooda.
Previous PostDAAWO: Soomaali qaybtii labaad oo Daraati Laga soo Masaafuriyey Mareykanka oo Muqdisho kasoo degay Maqaal!! Next PostDAAWO: Dawladda Turkiga oo Go’aan Farxad uga qayb qaadanaysa Abaaraha MUUQAAL!!